ခရီးသွားပိတ်ပင်မှု update ကို - important information for people coming to the USA | USAHello
ခရီးသွားပိတ်ပင်မှု update ကို
ဇန္နဝါရီလ 31, 2020 – the Trump administration added six more countries to the travel ban. Read what the travel ban means for immigrants and refugees, country by country.
Starting on February 22, people from Nigeria, မြန်မာ, အီရီထရီးယား, Kyrgyzstan, Sudan and Tanzania will be added to the travel ban.
Immigration from Nigeria, မြန်မာ, အီရီထရီးယား, and Kyrgyzstan will be banned. People from Sudan and Tanzania will not be allowed to enter the diversity visa lottery. The government said student visas and work visas for temporary or skilled workers are not affected. Officials said the countries were added to the travel ban for security reasons.
သင်လုပ်နိုင်သည် read the announcement from the Department of Homeland Security. The travel ban is still being challenged in the US courts.
Entry as an immigrant is banned. Entry is also banned for all nonimmigrant visa categories (student, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, tourist etc).
People from Sudan are still allowed to come, but they cannot apply to the ဗီဇာထီ.
Entry as an immigrant is banned. Entry is also banned for all nonimmigrant visa categories (student, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, tourist etc.).
People from Tanzania are still allowed to come, but they cannot apply to the ဗီဇာထီ.
People from Iran, လစ်ဗျားနိုင်ငံ, ဆိုမာလီယာ, Syria and Yemen have been the most affected. Visas issued to people in those countries were down by 80% compared to 2016.
တစ်ဦးက 2018 decision by the Supreme Court
နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်း (IRAP) offers “သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိ” advice for those affected by the travel ban. The English version of their guide is current as of April 10, 2018, including new refugee screening procedures.
You can find translations into عربي [အဘိဓါန် Arabic], فارسى [ဖာစီ], နှင့် af Soomaali [ဆိုမာလီ].
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်, အဆိုပါ International Refugee Assistance Project (IRAP), NAFSA: Association of International Educators, နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.